“Shkodran Mustafi uma qalmo inuu ka ciyaaro Premier League” – Jamie Carragher – Gool FM
(England) 31 Okt 2019. Halyeeyga xulka qaranka England iyo kooxda Liverpool ee Jamie Carragher ayaa wuxuu dhaleeceen xoogan u jeediyay daafaca reer Germany iyo naadiga Arsenal ee Shkodran Mustafi, kaddib qalad weyn uu ku hor sameeyay Reds, inta lagu gudi jiray kulankii xalay ay ku wada ciyaareen wareega 16-ka koobka Carabao Cup.
Liverpool ayaa u gudubtay wareega siddeed dhamaadka koobka Carabao Cup, kaddib markii ay Arsenal kaga adkaatay, rigoorayaal 5-4 ah, xilli 90-ka daqiiqo ee ciyaarta ay ku soo idlaatay barbaro 5-5 ah, kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka Anfield.
Daqiiqado yar kaddib bilowga ciyaarta, Shkodran Mustafi ayaa wuxuu hogaanka u dhiibay kooxda Liverpool, kaddib markii uu iska dhaliyay gool, kulnkii xalay ay labada naadi ee Reds iyo Gunners iska dhaliyeen 10 gool.
Haddaba halyeeyga Jamie Carragher ayaa wuxuu ciyaarta kaddib sheegay in qof walba ay u fiicnaan laheyd bixitaanka Shkodran Mustafi, kaddib qaladkii uu ku hor sameeyay kooxda Liverpool.
Jamie Carragher ayaa ciyaarta kaddib sheegay:
“Waxaan u maleynayaa inay dhamaatay waqtigii uu ka ciyaari lahaa horyaalka Premier League, kaddib maarka uu sameeyo wax shaqsiyaadka kale ee Arsenal ka dhigaya kuwo walwalsan”.
“Ciyaartoyda uma maleynayo inay kala bar shaqadooda tahay inay daboolaan qaladaadka Mustafi, waxaan u maleynayaa in haddii uu baxo ay u fiicnaan laheyd qof walba oo Arsenal jooga”.